ငယ်စဉ်ကတည်းက ရုိုက်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ အကြောက်တရား - Barnyar Barnyar
ငယ်စဉ်ကတည်းက ရုိုက်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ အကြောက်တရား
March 29, 2022 KNOWLEDGE 0
မင်းတုန်းမင်း ငယ်ရွယ်စဉ် မောင်လွင်ဘဝက စံကျောင်း ဆရာတော် ဆီမှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရတယ်။ တစ်နေ့မှာ အင်းသားကြီးငကြူးက ငါးခြောက်ပြားကြီး တစ်ပြားလာပြီး လှူတယ်။ ဆရာတော်က ငါးခြောက်ကို သိပ်ကြိုက်ပါသတဲ့။
ကျောင်းမှာကလည်း ငါးခြောက်ပြတ်လပ်နေချိန်ဖြစ်တော့ ဆရာတော်က မောင်လွင်ကို ကျက်သရေခန်းထဲမှ သေသေချာချာ သိမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ဆရာတော် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတဲ့အခါ မောင်လွင်ကို ငါးခြောက် ဖုတ်ခိုင်းတော့ ငါးခြောက်က ရှာမတွေ့တော့ဘူး။
ဆရာတော်ကတော့ လက်ဆေးပြီး နှမ်းဆီမွှေးမွှေးနဲ့ ရောက်လာမယ့် ငါးခြောက်ဖုတ်ကို စောင့်နေတာပေါ့။ မောင်လွင်မှာ ဘယ်လိုမှ ရှာဖွေ မေးမြန်း စုံစမ်းလို့မရဘဲ ဗျာများနေခိုက် … ” ဟဲ့ … ငလွင်မရသေးဘူးလား” လို့ မေးလိုက်တော့ ညှိုးညှိုးငယ်ငယ်နဲ့ပဲ ငါးခြောက်ပြားကြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်း တင်လျှောက် ရတော့တယ်။
” ငလွင် … လာခဲ့” လို့ ထားဝယ်ကြိမ်ကို ဆွဲပြီး ခေါ်လိုက်တဲ့ ဆရာတော်အသံက ကျောင်းသား အားလုံးရဲ့ နှလုံးသားကို ကန့်လန့်ဖြတ် ဝင်သွားပါသတဲ့။
“ဟဲ့ … ငလွင် နင်ဟာ ဘုရင့်သား၊ အကြောင်း ညီညွတ်ရင် နိုင်ငံကို အုပ်ချူပ် မင်းလုပ်ရမယ့်သူ။ ဒီလိုလူက ငါးခြောက်ပြား တစ်ချပ်ကိုတောင် လုံခြုံအောင် မစောင့်ရှောက်နိုင်ရင် နိုင်ငံကို နင်ဘယ်လို လုံခြုံအောင် လုပ်နိုင်တော့မှာလဲ” လို့ မိန့်ပြီး အချက်ပေါင်း များစွာ ရိုက်နှက်ဆုံးမပါသတဲ့…
ဒီဆောင်းပါးကို သင်ပြီးတော့ ဆရာက သင်ရိုးထဲက မေးခွန်းတွေကို ဖြေခိုင်းပါတယ်။ မေးခွန်း တစ်ခုက စံကျောင်း ဆရာတော်၏ဆုံးမမှု ကို သင်လက်ခံပါသလား လို့ အဓိပ္ပါယ်လိုပေါက်တဲ့ မေးခွန်းပါ။ နောက်တစ်နေ့ မြန်မာစာအချိန်ရောက်တော့ ဆရာဟာ အတန်းထဲကို ခြေသံပြင်းပြင်းနဲ့ ဝင်လာပါတယ်။ အဖြေလွှာ တွေကို စားပွဲပေါ် ဘုန်းခနဲမြည်အောင် ပစ်ချ လိုက်ပါတယ်။
ဆရာ့မျက်နှာက နီပြီးတင်းလို့။ တစ်တန်းလုံးကို ဝေ့ဝဲပြီးကြည့်တယ်။ တစ်တန်းလုံးကလည်း ငြိမ်လို့။ ဆရာ ဘာဖြစ် လာတာပါလိမ့်လို့ တွေးနေကြပုံပဲ။ ဆရာက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကို ခေါ်ပြီး အတန်းရှေ့ ထွက်ခိုင်းပါတယ်။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မေးလာလိုက်တာ …ထိုကျောင်းသားရဲ့ အလှည့် ရောက်လာပါတယ်။
နာမည်ခေါ်သံကြားတာနဲ့ အဖြေရှင် ထိုကျောင်းသာဟာ ထရပ်လိုက်ပါတယ်။ အသက် တစ်ချက် ပြင်းပြင်း ရှူသံကြားလိုက်တယ်။ ဆရာက အဖြေလွှာတစ်ရွက်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး အဲဒီကျောင်းသားကို ပေးလိုက်တယ်။
” ဒါ…….. မင်း အဖြေလား ” ” ဟုတ်……. ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ ” ” ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိလဲ ” ဟုတ်ကဲ့ “ကျွန်တော်မှားပါတယ် …” “အေး … တစ်တန်းလုံး ကြားအောင် ဖတ်စမ်း” နည်းနည်း အံ့သြနေပုံနှင့် ကျောင်းသားက သူ့အဖြေကို ဖတ်ပါတယ်။
” မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် စံကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ဆုံးမပုံကို မကြိုက်ကြောင်း၊ ဆရာတော်ရဲ့ အဲဒီအချိန်က စိတ်ခံစားမှုဟာ တပည့်ကို လမ်းညွှန်ချင်စိတ်ထက် မိမိအလွန်တရာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ငါးခြောက်ဖုတ်ကို ဘုန်းမပေးရတဲ့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒေါသစိတ်ကပိုပြီး ကြီးမားနေနိုင်ကြောင်း၊
ပြီးတော့ ဒီကိစ္စဟာ ဒီလောက် ရိုက်နှက် အပြစ်ပေးစရာ မလိုကြောင်း၊ နားဝင်အောင်ဆုံးမလျှင် ရပါလျက်နှင့ သေရာပါ အမာရွတ်ထင်အောင် ရိုက်နှက်ခြင်းဟာ ဒေါသစိတ်ကြောင့်ဟု သံသယဖြစ်စရာရှိကြောင်း၊ ဘုရားသားတော်တို့ မည်သည် ရသတဏှာအဖြစ် ဆွမ်းဘုဉ်း မပေးသင့်သည်ကို သတိရသင့်ကြောင်း၊
ဆရာကိုယ်တိုင်က ဤဝိနည်းကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါဘဲ တပည့်ကို ဆုံးမခြင်းမှာ စဉ်းစားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသားနာမှ အရိုးစွဲမှတ်မည်လို့ထင်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးဆုံးမခဲ့ပေမယ့် မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်မှာ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလိပ် လက်သို့ ထိုးပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီဆုံးမနည်းဟာ မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း” အဲဒီလိုတွေ ဖြေထားတာကို ဖတ်ပြပါတယ်။
တစ်တန်းလုံးက တခိခိနဲ့ရယ်ကြတယ်၊ သူတစ်ကြောင်းဖတ်လိုက်၊ ခိခိနဲ့ ကျိတ်ရယ်လိုက်ကြနဲ့။ ဆရာကတော ကျောင်းသားတွေရယ်လေ ဒေါသထွက်နေလေပါပဲ။ ကျောင်းသား ဖတ်သွားပြီးတော့ ဆရာက သူ့ကိုမေးတယ်။
“မင်း ငါ့ကို နောက်တာလား” “ဟာ ….. မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ၊ ကျွန်တော် မေးခွန်းကို ဖြေတာပါ” “ကဲ …. အားလုံး … သူဖြေတာကို လက်ခံကြသလား၊ တစ်ယောက်စီ မေးမယ်၊ ကဲ … မင်းကစ၊ သူဖြေတာ မှန်သလား မှားသလား ပထမဆုံး အမေးခံလိုက်ရတဲ့ ရှေ့ဆုံးခုံက ကျောင်းသားဟာ ရုတ်တရက် ဘာဖြေရမှန်း သိပုံ မရဘူး။
အဖြေရှင်ကျောင်းသားကို ကြည့်လိုက်၊ ဆရာ့ကို ကြည့်လိုက်၊ ဘေးဘီကို ကြည့်လိုက်နဲ့။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာတော့ … အဲဒီကျောင်းသားရဲ့ အဖြေကို ကြိုက်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့လိုခံစားမိတာပဲ။ ဒါပေမယ့် … သူ့လို … မဖြေတတ်ဘူး။ သူ့လို ထောင့်စေအောင် မမြင်တတ်ဘူး။ ပြီးတော့ သူ့လို … မဖြေရဲဘူး။ တစ်တန်းလုံး လိုလိုလည်း ကျွန်တော့်လိုဘဲ … ထင်တယ်။ သူတို့ မျက်နှာတွေကို ကြည့်ရင်သိသာပါတယ်။
“ဟေ့ကောင် … ဖြေလေကွာ” ရှေ့ဆုံးက ကျောင်းသားခမျာ တုန်သွားပါတယ်။ အဖြေရှင်ကျောင်းသားကို တစ်ချက်ခိုးကြည့်ပြီး ခေါင်းငုံ့ချ လိုက်တယ်။ တကယ်တော့ … ဆရာက … မှန်သလား၊ မှား သလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုကို မေးနေတယ် ဆိုပေမယ့် အမူအရာ၊ လေသံ၊ ဖန်တီးထားတဲ့ ဝန်းကျင် အငွေ့အသက်တွေက မှားတယ်လို့ ဖြေစမ်း၊ မဖြေရင် ကြိမ်လုံး လို့ပြောပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။
ဆရာက ကျောင်းသားတွေကို လိမ်နေသလို သူတရားပါတယ် ဖြစ်အောင် … သူကိုယ်တိုင်လည်း ပြန်လိမ်နေတာပါ။ ဒါကို အဲဒီကျောင်းသားလည်း သဘောပေါက်ဟန် တူပါရဲ့။ “သူဖြေတာ … မှားပါတယ်” “ဟုတ်ပြီ၊ နောက်တစ်ယောက်” “မှား …. အဲ …မှားပါတယ်” “နောက်တစ်ယောက်” “မှားပါတယ် …” တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မေးလာလိုက်တာ …
ကျွန်တော် ထရပ်လိုက်ပါတယ်။ အသက် တစ်ချက် ပြင်းပြင်း ရှူလိုက်တယ်။ “မှားပါတယ် …” ခင်ဗျ အဖြေရှင်ကျောင်းသားကို မကြည့်ရဲပါဘူး။ ခေါင်းငုံ့ ပြီး ခုံပေါ်က … စာအုပ်ကိုပဲ စိုက်ကြည့် နေမိတယ်။
ထူးခြားတာက ကျောင်းသားအားလုံးလည်း ဒီလိုပါပဲ။ လူကုန်သွားတော့ ဆရာက အဲဒီကျောင်းသားကို နောက်ပြောင်မှုနဲ့ အတန်းထဲမှာ ရိုက်ပါတယ်။ ကြိမ်လုံးသံ တစ်ချက်ကြားရတိုင်း ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်နေရာမှာ နာနာသွားသလိုပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အရိုက်ခံနေရသလိုပဲ။ တစ်တန်းလုံးလည်း ကျွန်တော့လိုဘဲ ခံစားနေရမှာပါ။
အဲဒီကျောင်းသားဟာ ကျောင်းပြောင်းသွားပါတယ်။ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရဲတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာ့ မှာ ဒီလိုတပည့်မျိုး ဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ အဲဒီလို …ကျောင်းသားမျိုး ဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီက ဆန့်တွေးလိုက်ရင်တော့ … နိုင်ငံပေါ့ခင်ဗျာ ဒါ … ဆုံးရှုံးမှုပါ..
ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ဟာ ခံစားမှုခြင်း တူပါလျက်နဲ့ သူ့လို မဖြေရဲခဲ့တာလဲ။ ဖြေရဲသူ ရှိလာတာတောင် ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လို့ သူမှန်တယ်လို့ မပြောရဲခဲ့တာလဲ။ အာရုံထဲမှာတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြုံကြိုက် ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့
ကြိမ်လုံးတွေ … ကြိမ်လုံးတွေ …. ကြိမ်လုံးတွေ ………။ ခက်ထန်တဲ့ အမူအရာတွေ။ အဲဒီလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးထဲမှာ အကြောက်မျိုးစေ့တွေ ပွားများလာပြီး အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ကြောက်သီးတွေ တတွဲတွဲ၊ ကြောက်ပွင့်တွေ တဝေဝနဲ့ …။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပြု ပြင် ပြောင်းလဲဘို့ လိုအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်ဘာမှ မပြောရဲဘူး။
အပြု ဘက်က မြင်ပြီး ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရင် အကျိုး ရှိမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာကြီး သိမြင်နေပါလျက်ကနဲ့ အထက် လူကြီးမကြိုက်မှာစိုးလို့ ကျွန်တော်ဘာမှ အကြံ မပြုရဲဘူး။ ကျွန်တော့်ဆီက အကြံ၊ အတွေး၊ အမြင်၊ သဘောထားတွေကိုလည်း ဘယ်သူကမှ … မတောင်းကြဘူးလေ။
သင်ခဲ့ရတဲ့ ပညာတွေ စာအုပ်ထဲ ပြန်သွားလည်း သွားပေရော့ပေါ့။ ဟောဒီ ပရောဂျက်ဟာ ဘယ်နေရာမှာ မှားနေတယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်ပေမယ့် ဒါဟာ ပြောရမယ့် ကိစ္စလို့ ကျွန်တော် မထင်တော့ဘူး၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ … အဲဒါ …ကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ ထင်လာတယ်။
ဒီလို ယဉ်ကျေးမှုမျိုးပေါ်ထွန်းဖို့ထက် အထက် အဆင့်ဆင့်၊ အောက်အဆင့်ဆင့်က လူတွေအာလုံးက ဒီလို ဖြစ်စဉ်မျိုး ကြုံလာရင် ဒါကို မှန်တယ် ထင်လာကြရင်ဖြင့် …… ဌာန မနာဘူးလား တိုင်းပြည် မနာဘူးလား ပညာရပ်အမြင်နဲ့ ကြည့်ရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ လူသားအားလုံး နာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ……. ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အကြီးကောင်ရဲ့ ငိုသံပြဲကြီးကို ကြားရပါတယ်။ သူ့အမေ လက်ထဲမှာ တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့။
“ဘယ်လို ဖြစ်နေကြတာလဲကွာ” “ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ၊ တော့် သားက … အိမ်စာပြီးအောင် မလုပ်ဘဲ ကမြင်းတာလေ၊ ပန်းကန်တစ်လုံး ကွဲပြီ။” “ဘာဖြစ်လဲကွ၊ ကလေးဆိုတာ … ဒီအရွယ်မှာ …” “တော် … စာအုပ်ထဲက ဟာတွေ လာပြောမနေနဲ့၊ ပန်းကန်တစ်လုံး … ဘယ်လောက် အောက်မေ့လို့လဲ၊ ရှင့် ဝင်ငွေက ဘယ်လောက် …..”
ရွယ်ထားတဲ့ တုတ်အောက်ကနေပြီး သားကြီးက အကြောက်မျက်လုံးများနဲ့ ကျွန်တော့်ကို … အားကိုးတကြီး ကြည့်နေရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေ့မျက်လုံးတွေကလည်း သားရဲ့ မျက်လုံးတွေလိုဘဲ … ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီကောလား … သားရယ်။
စာရေးသူကို လေးစားစွာ ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ် ခင်ဗျာ။
ငယျစဉျကတညျးက ရိုကျသှငျးခံခဲ့ရတဲ့ အကွောကျတရား
မငျးတုနျးမငျး ငယျရှယျစဉျ မောငျလှငျဘဝက စံကြောငျး ဆရာတျော ဆီမှာ ပညာသငျကွားခဲ့ရတယျ။ တဈနမှေ့ာ အငျးသားကွီးငကွူးက ငါးခွောကျပွားကွီး တဈပွားလာပွီး လှူတယျ။ ဆရာတျောက ငါးခွောကျကို သိပျကွိုကျပါသတဲ့။
ကြောငျးမှာကလညျး ငါးခွောကျပွတျလပျနခြေိနျဖွဈတော့ ဆရာတျောက မောငျလှငျကို ကကျြသရခေနျးထဲမှ သသေခြောခြာ သိမျးခိုငျးလိုကျပါတယျ။ နောကျတဈနေ့ ဆရာတျော ဆှမျးဘုဉျးပေးတဲ့အခါ မောငျလှငျကို ငါးခွောကျ ဖုတျခိုငျးတော့ ငါးခွောကျက ရှာမတှတေ့ော့ဘူး။
ဆရာတျောကတော့ လကျဆေးပွီး နှမျးဆီမှေးမှေးနဲ့ ရောကျလာမယျ့ ငါးခွောကျဖုတျကို စောငျ့နတောပေါ့။ မောငျလှငျမှာ ဘယျလိုမှ ရှာဖှေ မေးမွနျး စုံစမျးလို့မရဘဲ ဗြာမြားနခေိုကျ … ” ဟဲ့ … ငလှငျမရသေးဘူးလား” လို့ မေးလိုကျတော့ ညှိုးညှိုးငယျငယျနဲ့ပဲ ငါးခွောကျပွားကွီး ပြောကျဆုံးသှားတဲ့အကွောငျး တငျလြှောကျ ရတော့တယျ။
” ငလှငျ … လာခဲ့” လို့ ထားဝယျကွိမျကို ဆှဲပွီး ချေါလိုကျတဲ့ ဆရာတျောအသံက ကြောငျးသား အားလုံးရဲ့ နှလုံးသားကို ကနျ့လနျ့ဖွတျ ဝငျသှားပါသတဲ့။
“ဟဲ့ … ငလှငျ နငျဟာ ဘုရငျ့သား၊ အကွောငျး ညီညှတျရငျ နိုငျငံကို အုပျခြူပျ မငျးလုပျရမယျ့သူ။ ဒီလိုလူက ငါးခွောကျပွား တဈခပျြကိုတောငျ လုံခွုံအောငျ မစောငျ့ရှောကျနိုငျရငျ နိုငျငံကို နငျဘယျလို လုံခွုံအောငျ လုပျနိုငျတော့မှာလဲ” လို့ မိနျ့ပွီး အခကျြပေါငျး မြားစှာ ရိုကျနှကျဆုံးမပါသတဲ့…
ဒီဆောငျးပါးကို သငျပွီးတော့ ဆရာက သငျရိုးထဲက မေးခှနျးတှကေို ဖွခေိုငျးပါတယျ။ မေးခှနျး တဈခုက စံကြောငျး ဆရာတျော၏ဆုံးမမှု ကို သငျလကျခံပါသလား လို့ အဓိပ်ပါယျလိုပေါကျတဲ့ မေးခှနျးပါ။ နောကျတဈနေ့ မွနျမာစာအခြိနျရောကျတော့ ဆရာဟာ အတနျးထဲကို ခွသေံပွငျးပွငျးနဲ့ ဝငျလာပါတယျ။ အဖွလှော တှကေို စားပှဲပျေါ ဘုနျးခနဲမွညျအောငျ ပဈခြ လိုကျပါတယျ။
ဆရာ့မကျြနှာက နီပွီးတငျးလို့။ တဈတနျးလုံးကို ဝဝေဲ့ပွီးကွညျ့တယျ။ တဈတနျးလုံးကလညျး ငွိမျလို့။ ဆရာ ဘာဖွဈ လာတာပါလိမျ့လို့ တှေးနကွေပုံပဲ။ ဆရာက ကြောငျးသားတဈယောကျရဲ့ နာမညျကို ချေါပွီး အတနျးရှေ့ ထှကျခိုငျးပါတယျ။ တဈယောကျပွီးတဈယောကျ မေးလာလိုကျတာ …ထိုကြောငျးသားရဲ့ အလှညျ့ ရောကျလာပါတယျ။
နာမညျချေါသံကွားတာနဲ့ အဖွရှေငျ ထိုကြောငျးသာဟာ ထရပျလိုကျပါတယျ။ အသကျ တဈခကျြ ပွငျးပွငျး ရှူသံကွားလိုကျတယျ။ ဆရာက အဖွလှောတဈရှကျကို ဆှဲထုတျပွီး အဲဒီကြောငျးသားကို ပေးလိုကျတယျ။
” ဒါ…….. မငျး အဖွလေား ” ” ဟုတျ……. ဟုတျပါတယျဆရာ ” ” ဘယျသူ့မှာ တာဝနျရှိလဲ ” ဟုတျကဲ့ “ကြှနျတျောမှားပါတယျ …” “အေး … တဈတနျးလုံး ကွားအောငျ ဖတျစမျး” နညျးနညျး အံ့သွနပေုံနှငျ့ ကြောငျးသားက သူ့အဖွကေို ဖတျပါတယျ။
” မှတျမိသလောကျဆိုရငျ စံကြောငျးဆရာတျောရဲ့ဆုံးမပုံကို မကွိုကျကွောငျး၊ ဆရာတျောရဲ့ အဲဒီအခြိနျက စိတျခံစားမှုဟာ တပညျ့ကို လမျးညှနျခငျြစိတျထကျ မိမိအလှနျတရာ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ငါးခွောကျဖုတျကို ဘုနျးမပေးရတဲ့အတှကျ ဖွဈပျေါလာတဲ့ ဒေါသစိတျကပိုပွီး ကွီးမားနနေိုငျကွောငျး၊
ပွီးတော့ ဒီကိစ်စဟာ ဒီလောကျ ရိုကျနှကျ အပွဈပေးစရာ မလိုကွောငျး၊ နားဝငျအောငျဆုံးမလြှငျ ရပါလကျြနှင့ သေရောပါ အမာရှတျထငျအောငျ ရိုကျနှကျခွငျးဟာ ဒေါသစိတျကွောငျ့ဟု သံသယဖွဈစရာရှိကွောငျး၊ ဘုရားသားတျောတို့ မညျသညျ ရသတဏှာအဖွဈ ဆှမျးဘုဉျး မပေးသငျ့သညျကို သတိရသငျ့ကွောငျး၊
ဆရာကိုယျတိုငျက ဤဝိနညျးကို မထိနျးသိမျးနိုငျပါဘဲ တပညျ့ကို ဆုံးမခွငျးမှာ စဉျးစားဖှယျဖွဈကွောငျး၊ အသားနာမှ အရိုးစှဲမှတျမညျလို့ထငျပွီး ပွငျးပွငျးထနျထနျ အပွဈပေးဆုံးမခဲ့ပမေယျ့ မငျးတုနျးမငျး လကျထကျမှာ အောကျမွနျမာနိုငျငံ တဈခုလုံးကို အင်ျဂလိပျ လကျသို့ ထိုးပေးလိုကျရတဲ့အတှကျ ဒီဆုံးမနညျးဟာ မအောငျမွငျနိုငျကွောငျး” အဲဒီလိုတှေ ဖွထေားတာကို ဖတျပွပါတယျ။
တဈတနျးလုံးက တခိခိနဲ့ရယျကွတယျ၊ သူတဈကွောငျးဖတျလိုကျ၊ ခိခိနဲ့ ကြိတျရယျလိုကျကွနဲ့။ ဆရာကတော ကြေောငျးသားတှရေယျလေ ဒေါသထှကျနလေပေါပဲ။ ကြောငျးသား ဖတျသှားပွီးတော့ ဆရာက သူ့ကိုမေးတယျ။
“မငျး ငါ့ကို နောကျတာလား” “ဟာ ….. မဟုတျပါဘူး ဆရာ၊ ကြှနျတျော မေးခှနျးကို ဖွတောပါ” “ကဲ …. အားလုံး … သူဖွတောကို လကျခံကွသလား၊ တဈယောကျစီ မေးမယျ၊ ကဲ … မငျးကစ၊ သူဖွတော မှနျသလား မှားသလား ပထမဆုံး အမေးခံလိုကျရတဲ့ ရှဆေုံ့းခုံက ကြောငျးသားဟာ ရုတျတရကျ ဘာဖွရေမှနျး သိပုံ မရဘူး။
အဖွရှေငျကြောငျးသားကို ကွညျ့လိုကျ၊ ဆရာ့ကို ကွညျ့လိုကျ၊ ဘေးဘီကို ကွညျ့လိုကျနဲ့။ ကြှနျတေျာ့ စိတျထဲမှာတော့ … အဲဒီကြောငျးသားရဲ့ အဖွကေို ကွိုကျနတေယျ။ ကြှနျတျောလညျး သူ့လိုခံစားမိတာပဲ။ ဒါပမေယျ့ … သူ့လို … မဖွတေတျဘူး။ သူ့လို ထောငျ့စအေောငျ မမွငျတတျဘူး။ ပွီးတော့ သူ့လို … မဖွရေဲဘူး။ တဈတနျးလုံး လိုလိုလညျး ကြှနျတေျာ့လိုဘဲ … ထငျတယျ။ သူတို့ မကျြနှာတှကေို ကွညျ့ရငျသိသာပါတယျ။
“ဟကေ့ောငျ … ဖွလေကှော” ရှဆေုံ့းက ကြောငျးသားခမြာ တုနျသှားပါတယျ။ အဖွရှေငျကြောငျးသားကို တဈခကျြခိုးကွညျ့ပွီး ခေါငျးငုံ့ခြ လိုကျတယျ။ တကယျတော့ … ဆရာက … မှနျသလား၊ မှား သလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးနှဈခုကို မေးနတေယျ ဆိုပမေယျ့ အမူအရာ၊ လသေံ၊ ဖနျတီးထားတဲ့ ဝနျးကငျြ အငှအေ့သကျတှကေ မှားတယျလို့ ဖွစေမျး၊ မဖွရေငျ ကွိမျလုံး လို့ပွောပွီးသား ဖွဈနပေါပွီ။
ဆရာက ကြောငျးသားတှကေို လိမျနသေလို သူတရားပါတယျ ဖွဈအောငျ … သူကိုယျတိုငျလညျး ပွနျလိမျနတောပါ။ ဒါကို အဲဒီကြောငျးသားလညျး သဘောပေါကျဟနျ တူပါရဲ့။ “သူဖွတော … မှားပါတယျ” “ဟုတျပွီ၊ နောကျတဈယောကျ” “မှား …. အဲ …မှားပါတယျ” “နောကျတဈယောကျ” “မှားပါတယျ …” တဈယောကျပွီးတဈယောကျ မေးလာလိုကျတာ …
ကြှနျတျော ထရပျလိုကျပါတယျ။ အသကျ တဈခကျြ ပွငျးပွငျး ရှူလိုကျတယျ။ “မှားပါတယျ …” ခငျဗြ အဖွရှေငျကြောငျးသားကို မကွညျ့ရဲပါဘူး။ ခေါငျးငုံ့ ပွီး ခုံပျေါက … စာအုပျကိုပဲ စိုကျကွညျ့ နမေိတယျ။
ထူးခွားတာက ကြောငျးသားအားလုံးလညျး ဒီလိုပါပဲ။ လူကုနျသှားတော့ ဆရာက အဲဒီကြောငျးသားကို နောကျပွောငျမှုနဲ့ အတနျးထဲမှာ ရိုကျပါတယျ။ ကွိမျလုံးသံ တဈခကျြကွားရတိုငျး ကြှနျတေျာ့ ခန်ဓာကိုယျ တဈနရောမှာ နာနာသှားသလိုပဲ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ အရိုကျခံနရေသလိုပဲ။ တဈတနျးလုံးလညျး ကြှနျတော့လိုဘဲ ခံစားနရေမှာပါ။
အဲဒီကြောငျးသားဟာ ကြောငျးပွောငျးသှားပါတယျ။ ကိုယျ့ထငျမွငျခကျြကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောရဲတဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျကို ကြှနျတျောတို့ ဆုံးရှုံးလိုကျပါတယျ။ ဆရာ့ မှာ ဒီလိုတပညျ့မြိုး ဆုံးရှုံးလိုကျပါတယျ။ ကြောငျးမှာ အဲဒီလို …ကြောငျးသားမြိုး ဆုံးရှုံးလိုကျပါတယျ။ အဲဒီက ဆနျ့တှေးလိုကျရငျတော့ … နိုငျငံပေါ့ခငျဗြာ ဒါ … ဆုံးရှုံးမှုပါ..
ဘာဖွဈလို့ ကြှနျတျောဟာ ခံစားမှုခွငျး တူပါလကျြနဲ့ သူ့လို မဖွရေဲခဲ့တာလဲ။ ဖွရေဲသူ ရှိလာတာတောငျ ကြှနျတျောက ဘာဖွဈလို့ သူမှနျတယျလို့ မပွောရဲခဲ့တာလဲ။ အာရုံထဲမှာတော့ ငယျစဉျကတညျးက ကွုံကွိုကျ ဆုံစညျးခဲ့ရတဲ့
ကွိမျလုံးတှေ … ကွိမျလုံးတှေ …. ကွိမျလုံးတှေ ………။ ခကျထနျတဲ့ အမူအရာတှေ။ အဲဒီလို ကြှနျတျောတို့ရဲ့သှေးထဲမှာ အကွောကျမြိုးစတှေ့ေ ပှားမြားလာပွီး အရှယျရလာတာနဲ့အမြှ ကွောကျသီးတှေ တတှဲတှဲ၊ ကွောကျပှငျ့တှေ တဝဝေနဲ့ …။ လုပျငနျးခှငျထဲမှာ ပွု ပွငျ ပွောငျးလဲဘို့ လိုအပျတဲ့ ပွဿနာတှေ၊ အခကျအခဲတှေ ရှိရငျလညျး ကြှနျတျောဘာမှ မပွောရဲဘူး။
အပွု ဘကျက မွငျပွီး ပွောငျးလဲပဈလိုကျရငျ အကြိုး ရှိမယျဆိုတာ သသေခြောခြာကွီး သိမွငျနပေါလကျြကနဲ့ အထကျ လူကွီးမကွိုကျမှာစိုးလို့ ကြှနျတျောဘာမှ အကွံ မပွုရဲဘူး။ ကြှနျတေျာ့ဆီက အကွံ၊ အတှေး၊ အမွငျ၊ သဘောထားတှကေိုလညျး ဘယျသူကမှ … မတောငျးကွဘူးလေ။
သငျခဲ့ရတဲ့ ပညာတှေ စာအုပျထဲ ပွနျသှားလညျး သှားပရေော့ပေါ့။ ဟောဒီ ပရောဂကျြဟာ ဘယျနရောမှာ မှားနတေယျလို့ ကြှနျတျော မွငျပမေယျ့ ဒါဟာ ပွောရမယျ့ ကိစ်စလို့ ကြှနျတျော မထငျတော့ဘူး၊ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ … အဲဒါ …ကြှနျတျောမှနျတယျလို့ ထငျလာတယျ။
ဒီလို ယဉျကြေးမှုမြိုးပျေါထှနျးဖို့ထကျ အထကျ အဆငျ့ဆငျ့၊ အောကျအဆငျ့ဆငျ့က လူတှအောလုံးက ဒီလို ဖွဈစဉျမြိုး ကွုံလာရငျ ဒါကို မှနျတယျ ထငျလာကွရငျဖွငျ့ …… ဌာန မနာဘူးလား တိုငျးပွညျ မနာဘူးလား ပညာရပျအမွငျနဲ့ ကွညျ့ရငျ တဈကမ်ဘာလုံးနဲ့ လူသားအားလုံး နာပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ……. ကြှနျတျော အိမျပွနျရောကျတော့ အကွီးကောငျရဲ့ ငိုသံပွဲကွီးကို ကွားရပါတယျ။ သူ့အမေ လကျထဲမှာ တုတျတဈခြောငျးနဲ့။
“ဘယျလို ဖွဈနကွေတာလဲကှာ” “ဘယျလိုဖွဈရမလဲ၊ တေျာ့ သားက … အိမျစာပွီးအောငျ မလုပျဘဲ ကမွငျးတာလေ၊ ပနျးကနျတဈလုံး ကှဲပွီ။” “ဘာဖွဈလဲကှ၊ ကလေးဆိုတာ … ဒီအရှယျမှာ …” “တျော … စာအုပျထဲက ဟာတှေ လာပွောမနနေဲ့၊ ပနျးကနျတဈလုံး … ဘယျလောကျ အောကျမလေို့လဲ၊ ရှငျ့ ဝငျငှကေ ဘယျလောကျ …..”
ရှယျထားတဲ့ တုတျအောကျကနပွေီး သားကွီးက အကွောကျမကျြလုံးမြားနဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို … အားကိုးတကွီး ကွညျ့နရှောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖဖေမေ့ကျြလုံးတှကေလညျး သားရဲ့ မကျြလုံးတှလေိုဘဲ … ဖွဈနတော ကွာပါပွီကောလား … သားရယျ။
စာရေးသူကို လေးစားစှာ ခရကျဒဈပေးပါတယျ ခငျဗြာ။
” ဒီလိုလူ ၁၀ ယောက်ထဲမှာ မပါစေနဲ့ “
Hits Today : 8826
Total Hits : 318534